ဗိသုကာ Valery Gyurov နှင့်အတူအနာဂတ်ဖို့စဉ်းစားနေ - အောင်မြင်မှုပုံပြင်များမဂ္ဂဇင်း
Valerie Gyurov အမြဲစိတ်ဝင်စားဖို့နှင့်ပုံမှန်မဟုတ်သောအတွေးအခေါ်များနှင့်မည်သည့်အမျိုးအစားချထားသော, စိတ်ကူးအပြည့်အဝနေသောသူတို့ကိုအပြုသဘောလူများ၏တဦးတည်းဖြစ်၏။ အမြဲကျွန်ုပ်တို့အသက်ရှင်နေထိုင်ရာအရပ်မှာပိုကောင်းခံစားရနိုင်ရန်အတွက်လိုအပ်သည့်အဓိကအရာပဲအနည်းငယ်ကြောင်းကိုလူတိုင်းဖေါ်ပြခြင်းဖြင့်အသုံးပြုပုံပိုပြီးအဓိပ္ပာယ်ပြည့်နှင့်ပိုပြီး functional ဖြစ်စေ, ပိုမိုလှပသောတစ်ခုခုသို့မိမိအပတ်ဝန်းကျင်အသွင်ပြောင်းဖို့ကြိုးပမ်းသူကိုကျယ်ပြန့်ခြင်းနှင့်ကွဲပြားခြားနားအတွေ့အကြုံ, နဲ့ဗိသုကာပညာရှင် စိတ်ကူးစိတ်သန်း။ အောင်မြင်မှုပုံပြင်များမဂ္ဂဇင်းယျတျောနှငျ့အတူကျွန်တော်တို့ရဲ့စကားပြောဆိုမှု join ဖို့သငျသညျဖိတျချေါထား။
ဗိသုကာ Valery Gyurov:
ငါ 1982 အတွက်ဆိုဖီယာတှငျမှေးဖှားနဲ့ကျွန်မအလွန်ငယ်စဉ်ကတည်းကကိုယ့်အဆောက်အဦဆောက်လုပ်ရေးနှင့်ကွန်ကရစ်အပင်နိုင်ငံတွေကိုခရီးလှခံခဲ့ရသည်ရတဲ့အကြောင်းရင်းဖြစ်ခဲ့သည်ရာအဓိကအားဖြင့်အင်ဂျင်နီယာများ (ဖခင်, အဘိုး, ဘထွေး) ၏မိသားစုမှာကြီးပြင်းခဲ့သည်။ ကံကောင်းထောက်မစွာ, ငါသင်္ချာမှာအကောင်း wasn`t နှင့်ဤလမ်းကြောင်းကိုလိုက်လျှောက်ရန်အမှန်တကယ်အန္တရာယ်ရှိပါတယ် wasn`ta ။ ငါသညျလညျးရေးခွအပေါ်စိတ်အားထက်သန်မြင်သောနောက်ငါပုံမှန်မြို့ကောင်လေးသကဲ့သို့ငါ့ကို excites သောပတ်ဝန်းကျင်ပြောင်းလဲပစ်ရန်ကောင်းသောရွေးချယ်စရာအဖြစ်ကဤအရာနှစ်ခုမြင်သည်အတိုင်းအထက်တန်းကျောင်းရဲ့အဆုံးမှာငါဗိသုကာလေ့လာရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ ငါဆိုဖီယာအတွက်ဗိသုကာပညာတက္ကသိုလ်, မြို့ပြအင်ဂျင်နီယာနှင့် Geodesy များအတွက်စာမေးပွဲအတွက်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြင်ဆင်ထားရန်မည်သည့်အချိန် hadn`t ။ ငါ 18 ၏အသက်အရွယ်မှာစစ်မှုထမ်းဆန့်ကျင်ကာအာမခံအဖြစ်နည်းပညာဆိုင်ရာတက္ကသိုလ်ကအင်ဂျင်နီယာဒီဇိုင်းများအတွက်အရည်အချင်းပြည့်မှီမှစီမံခန့်ခွဲပေမယ့်တစ်ချိန်တည်းတွင်ငါတော်တော်များများဂျာမန်တက္ကသိုလ်များမှာကိုလက်ခံခဲ့ကြောင်း, ဒါကြောင့်ငါ 2001 အတွက်ဗိသုကာလေ့လာဖို့စတုဂတ်သို့သွားကြ၏။
ဖှယျနှင့်ရေရှည်တည်တံ့မြို့ပြဒီဇိုင်းအတွက်ကုမ္ပဏီ - မကြာသေးခင်အချိန်အထိသင် Urbanik ၏ Transformers အစည်းအရုံးနှင့် CEO ဖြစ်သူအတွက်အဓိကတာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များ၏တဦးတည်းရှိကြ၏။ သင်သည်သင်၏ proffesional လမ်းကြောင်း၏ဤအဆင့်အကြောင်းကိုကြှနျုပျတို့နှငျ့အတူအဘယျသို့ share မလဲ အဘယ်အရာကိုသင်ပေးနှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်သင်ကသင့်ရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအတွက်လာမယ့်ခြေလှမ်းအတွက်အချိန်ဖွစျကွောငျးကိုဆုံးဖြတ်လုပ်ခဲ့တာလဲ
ဟုတ်ပါတယ်, ညာဘက်ကိုငါ့ဘွဲ့ရပြီးနောက်ကျနော်ပြန်ဆိုဖီယာတယ်နဲ့ကျွန်မကိုလည်းကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဘဏ္ဍာရေးအကျပ်အတည်း၌ငါ့ကိုဖမ်းမိဘယ်မှာတစ်နှစ်နီးပါးများအတွက်ဗိသုကာ Stanishev ၏ရုံးခန်းထဲမှာအလုပ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်မဆန္ဒအလျောက်စွန် 2009 ရဲ့အဆုံးမှာငါအသင်းအဖွဲ့ "Transformers တည်ထောင်ခဲ့ပြီး "အတူတကွတချို့အပေါင်းအသင်းအတူ။ အသင်းအတွက်ခုနစ်လုံးကိုတက်ကြွစွာနှစ် URBANIK တစ်ဦးက CEO ကျနော်တို့အများဆုံးမကြာခဏခက်ခဲလမ်းအရာအားလုံးကိုယျ့ကိုယျကို ပြု. အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်သင်ယူငါ့ကိုအလွန်တန်ဖိုးရှိသောအတွေ့အကြုံနှင့်များစွာသောသင်ခန်းစာတွေပေးခဲ့တယ်အဖြစ်ပြီးခဲ့သည့်နှစ်အပါအဝငျ။ ကျနော်တို့စီမံကိန်းများအားလုံးအမြိုးမြိုးမှတဆင့် သွား. ငါအကြောင်းအရာများ, အကြေးခွံများနှင့်စိန်ခေါ်မှုများ၏ထိုကဲ့သို့သောအမျိုးမျိုးနှင့်အတူဝါကြွားနိုင်သောငါတို့နိုင်ငံအတွင်းရှိအခြားစတူဒီယိုရှိကွောငျးယုံကြည် don`t ။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ငါအလွတ်တန်း၏ဆူးလမ်းကြောင်းအပေါ်တာငါကငါ့ကိုမယူပါလိမ့်မယ်ဘယ်နေရာမှာငါတို့မြင်ပါလိမ့်မယ်ဒီနှစ်ဧပြီကနေသကဲ့သို့အပြောင်းအလဲနှင့် reboot လိုအပ် :)
တစ်ချိန်တည်းမှာပင်ငါဒီအဆင့်မှာငါ့အတက်ကြွပါဝင်ခြင်းမရှိဘဲ၎င်းတို့၏အောင်မြင်သောဖှံ့ဖွိုးတိုးဆက်လက်ကျနော်တို့ဖန်တီးကြောင်း, မြို့ပြဒီဇိုင်းများအတွက်အစည်းအရုံး, Smart Fab Lab မှ, URBANIK နှင့်ဓာတ်ခွဲခန်းမျှော်လင့်ပါတယ်။
သငျသညျအမြိုးမြိုးကိုအစပျိုးအတွက်ကွဲပြားခြားနားသောပါဝင်မှုရှိသည် - ဥပမာ, နောက်ဆုံးနှစ်ကုန်မှာ, သင်နိုင်ငံတွင်အပြုသဘောပြောင်းလဲမှုကိုအထောက်အကူဖြစ်စေမယ်လို့ထားတဲ့အမျိုးမျိုးသောလူထုအကြောင်းအရာများအပေါ်ဆန်းသစ်စိတ်ကူးများများအတွက်ယှဉ်ပြိုင်မှုအွန်လိုင်းပလက်ဖောင်းအတွက်လမ်းညွှန်တစ်ဦးတို့မကြာသေးမီကသငျသညျ ဘာစီလိုနာ, စပိန်အတွက်မြို့ပြပြည်သူ့ Space ကိုယှဉ်ပြိုင်မှုများအတွက်ဥရောပဆုကိုအတွက်ဘူလ်ဂေးရီးယားများအတွက်ကျွမ်းကျင်သူတစ်ဦးအဖြစ်ပါဝင်ခဲ့ပြီ။ သငျသညျထိုပြည်၌လည်းသင်၏နေထိုင်စဉ်အတွင်းအဘယ်အရာကိုဆွဲဆောင်မှုကိုစုသိမ်းခဲ့တာလဲ
သူတို့သည်ငါ၏နေ့စဉ်ဘဝမျိုးစုံကြွယ်ဝသောကွောငျ့အခြမ်းစီမံကိန်းများနှင့်လှုပ်ရှားမှုများတွင်ပါဝင်သူများထဲမှအမြဲငါ့ကိုရန်အရေးကြီးပါသည်ပါပြီ, ငါသည်လည်းကိုယ့်ကိုကိုယ်စဉ်းစားပါ။ ကောင်းမွန်သောသတင်းစိတ်ကူးများနှင့်လှုပ်ရှားမှု့ထဲကကျိန်းသေပိုပြီးပိန်ကြုံခဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာစင်မြင့်ကိုစတင်ခဲ့ကြသည့်အခါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သည်နောက်ကျ ပို. ပို. ပိုမိုတက်ကြွစွာလူများနှင့်အဖွဲ့အစည်းများ, အဲဒီမှာဖြစ်ပါတယ်။ အသင်းအဖွဲ့ "Tuk-တမ်" ကစီစဉ်ယှဉ်ပြိုင်မှု, (လေး: "ဤတွင်နှင့်ရှိတယ်") အစွမ်းသတ္တိကိုတွေ့ပါနှင့်သူတို့၏အတွေးအခေါ်များနားလည်သဘောပေါက်ဖို့ထောကျပံ့ပေးလိမ့်မယ်: ငါက "Ideynik" (စုဆောင်းစိတ်ကူးများရာအရပ်လေး) ထံမှသင်းကြောင်းမျှော်လင့်ပါတယ်။
တစ်ခုမှာဗိသုကာတပတ်ကနေ Ljubo Georgiev နှင့်အတူစီမံကိန်းများကိုအမည်စာရင်းတင်သွင်းဖို့ဖိတ်ခေါ်ချက်တစ်ခုဂုဏ်အသရေနှင့်ငါ့အဘို့အပျြောအပါးခဲ့ပါတယ်။ ကျနော်တို့ဘူလ်ဂေးရီးယားကနေ 15 ထိုက်တန်စီမံကိန်းကြီးများကို select နိုင်ခဲ့ကြတယ်, ငါသည်လည်းအခြားသူများကိုဤသိက္ခာရှိသောပြိုင်ဆိုင်မှုအတွက်ရှိစွာကျွန်တော်တို့ရဲ့တိုင်းပြည်ကိုကိုယ်စားပြုပြိုင်ပွဲများတွင်အလိုအလျောက်ပူးပေါင်းပြီမျှော်လင့်ပါတယ်။
Rechno Storeno အမည်ရှိ Perlovska မြစ်၏တိုးတက်မှုများအတွက်အလွန်အေးမြသောပဏာမဤအတောအတွင်းငါဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးလည်းကူညီပေးခဲ့သ (လေး: ဘူဂေးရီးယားအတွက် wordplay - Recheno storeno = ကပြောသည် & ပြုမိ; Rechno storeno = မြစ်ပြုသောအမှု) ။ ဒါကြောင့်မကြာမီကျွန်မယုံကြည်ပါတယ်, အပြုသဘောအမှုအရာကြီးသောဤစီမံကိန်းအကြောင်းကိုလည်းကြားသိပါလိမ့်မည်။
ငါတစ်နည်းနည်းနဲ့လူ့အသက်ကိုအတွက်7နှစ်သံသရာကိုယုံကြည်, ဒါကြောင့်အပြောင်းအလဲအတွက်ငါ့ကိုတစ်ဦးကိုနှိပ်လိုအပ်သဘာဝကျကျရှိ၏။
ငါဖြစ်ကောင်းအနည်းငယ်ပုံမှန်ဗိသုကာငါ့ကိုဒုစရိုက်ကိုပြုမှာမဟုတ်ဘူး, ငါ့အားသာချက်, လုပ်ပိုင်ခွင့်များနှင့်အရည်အချင်းများကိုရောက်ရှိပါလိမ့်မယ်ဘယ်လိုဝေးကိုတွေ့မြင်ချင်တယ်။ ကျွန်မအလွန်သေးငယ်တဲ့တာဝန်များကိုကိုချစ်နဲ့ကျွန်မအရည်အသွေးကိုအသေးစိတ်သူတို့ကိုချပြီးကြိုက်တယ်။
ကျွန်မအထူးသဖြင့်ငါ့ထံသို့အမည်မသိဖြစ်ကြောင်းသောနေရာများနှင့်နိုင်ငံများ, ခရီးသွားလာရန်ကိုချစ်။ မှတပါးငါနေဆဲရေးနှင့်ဆေးထိုးခြင်းအတော်လေးတက်တက်ကြွကြွမြို့ပြနှင့်ဆင်ခြေဖုံးပတ်ဝန်းကျင်အတွက်, ဒါကြောင့်ငါယခု မှစ. ငါအဖြစ်ကိုကောင်းစွာသောဤလှုပ်ရှားမှုများအပေါ်ပိုပြီးအချိန်နှင့်စွမ်းအင်ဖြုန်းဖို့ဆက်လက်နိုင်သည်ကိုမျှော်လင့်ပါတယ်။
ဝက်ဘ်ဆိုက် SOCMUS - သင်သည်ငါနှင့်အတူသင်၌ပါဝင်ရန်အခြားစီမံကိန်းအကြောင်းနည်းနည်းပို share ပေးလို့ရမလား?
SOCMUS လူ့အဖွဲ့အစည်းနှင့်သမိုင်းမှကျွန်တော်တို့ရဲ့လူမှုရေးအကြွေးတူတစ်ခုခုပါပဲ။ ကျနော်တို့ Nikola Mihov အတူဤစီမံကိန်းစတင် မာတင် Angelov 2011 အတွက်သာစိတ်အားထက်သန်မှုနှင့်ကျွန်တော်ထိုကာလအဘို့အတောမကြောင့်၎င်း, ဆိုရှယ်လစ်ဝါဒ၏အချိန်ကနေဘူဂေးရီးယားဂရပ်ဖစ်ဒီဇိုင်းဘဏ္ဍာကိုထိန်းသိမ်းပေးဖို့ဆန္ဒအားဖြင့်မောင်းနှင်ကျနော်တို့တောင်မှသတိရှိရှိကြောင့်ခံစားခဲ့ရပြီမဟုတ်ပေမယ့်ဒီကာလဖြစ်ပါတယ်ရိုးရှင်းစွာသောကွောငျ့ သောလက်ဖြင့်အများအပြားတန်ဖိုးရှိသောအမှုအရာနှင့်ဤလုပ်အဲဒီမှာခဲ့ကြသည်! ကျနော်တို့ကအခြေခံအုတ်မြစ်စေနှင့်ဤမျက်နှာစာပေါ်လည်းအလေးအနက်ထားဆောင်ရွက်ရန်လိုခငျြကျနော်တို့အစွမ်းသတ္တိကိုရှာတွေ့ဖို့မျှော်လင့်နှင့်ပိုပြီးနောက်လိုက်အဆင့်မြင့်ဖို့ကဒီမှာလည်းမသွားနိုင်။
© Valery Gyurov
ဇွန်လ 2015 ခုနှစ်တွင်သင်နီးပါးတစ်လကြာအောင်ရှိရာအမေရိကန်, နေရာလုယူသောနိုင်ငံတကာဧည့်သည်ခေါင်းဆောင်မှုအစီအစဉ်အတွက်ပါဝင်ခဲ့။ သင်တို့သည်ငါတို့၏စာဖတ်သူတွေနည်းနည်းကအကြောင်းပိုမိုနှငျ့သငျကနေကိုစုသိမ်းသောအတှေ့အကွုံကိုရှင်းပြနိုင်ပါသလား?
ဒါကဆက်ဆက်ငါ့အဘို့ယခုနှစ်အတွေ့အကြုံနှင့်တစ်ဦးအလွန်တန်ဖိုးရှိသောတစျခုဖွစျသညျ။ ငါမှနက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းကျေးဇူးတင်မိပါတယ် ရစ်ချတ် Damstra အဘယ်သူသည်ဘူလ်ဂေးရီးယားအတွက်အမေရိကန်သံရုံး၏ကိုယ်စားပေါ်မှာဤအစီအစဉ်တွင်ပါဝင်ဆောင်ရွက်ရန်ငါ့ကိုအမည်စာရင်းတင်သွင်း။ ဝါရှင်တန်, Pittsburgh, Denver နှင့် San Francisco, အစည်းအဝေးနှင့်အစိုးရနဲ့တူအမျိုးမျိုးသောကဏ္ဍများမှကိုယ်စားလှယ်များနှင့်အတူဆွေးနွေးခြင်း, NGO များ, စီးပွားရေး, စတာတွေဘာသာရပ် - သုံးပတ်အတွင်းငါအတူတူအမျိုးမျိုးသောလယ်ကွင်းထဲကနေ 16 သည်အခြားကျွမ်းကျင်သူအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့နှင့်အတူလေးဒေသဆိုင်ရာမြို့ကြီးများကိုခရီးထွက်ခဲ့ဖူးတယ် ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲသည့်မြို့ပြဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်။ ကျနော်တို့အမျိုးမျိုးသောနယ်ပယ်များတွင်ခေါင်းဆောင်များအနေဖြင့်အများအပြားအပြုသဘော Impulses သတင်းပို့နှင့်အတွင်းပိုင်းသတင်းအချက်အလက်ကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။ သီးခြားအကြှနျုပျနှငျ့အအုပ်စု၏ကျန်တကယ်မိတ်ဆွေကောင်းဖြစ်လာခဲ့သည်နှင့်ဟာသအဖြစ်ကျနော်တို့ (ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အရေအတွက်ကများနှင့်ကွဲပြားခြားနားသောလူမျိုးစုများမှ) မှ G-17 ကိုယျ့ကိုယျကိုချေါပွီးကျနော်တို့တက်ကြွစွာအစဉ်အဆက်ကတည်းကအကောင်းဆက်ဆံရေးကိုထိန်းသိမ်းရန်။
ငါက, သင်အဘယ်သို့ပြုမည်အရာကိုအကြောင်းကိုကောင်းသောခံစားရရန်တန်ဖိုးရှိသောနှင့်သင်ကိုယ်တိုင်နောက်ကွယ်မှထိုက်တန်တစ်ခုခုစွန့်ခွာဖို့, ဒါပေမယ့်အများအားဖြင့်ကောင်းတစ်သူတစ်ဦးဖြစ်, ကျန်းမာမိသားစုနှင့်မိတ်ဆွေကောင်းရှိဖို့, သင်တို့အပေါ်မှာရေတွက်လို့ရပါတယ်ဘယ်သူကိုဖြစ်ပါတယ်ထင်ပါတယ်။
သင်သည်တစုံတခုကိုနောင်တရဖို့မနောက်ကျောကိုကြည့်တဲ့အခါမှာအရေးကြီးတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာအမြဲတမ်းနောက်ဆုံးအချိန်တွေထက်ပိုကောင်းနိုင်ပါတယ်ကြောင်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်ပါသည်, သို့သော်အရေးကြီးသောအရာဘား, အဆင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုချွတ်ခေါက်ဘယ်တော့မှရန်ဖြစ်ပါသည်။
ခရီးများထွက်ခြင်း, တွေ့ဆုံ, ငါသည်သို့ခုန်အပိုငျးအပင်, ငါ့ကိုဝန်းရံသောပတ်ဝန်းကျင်တွင်။
အထူးသကိုပိုပြီးလူနဲ့ပိုကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်လာလူမျိုး၏ဘူလ်ဂေးရီးယားငါအိပ်မက်အဘို့, အခြားအရာအားလုံးကျောင်းပညာရေး, ပညာရေးနှင့်ခက်ခဲအလုပ်ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်။ တကမ္ဘာလုံး - အရှေ့, အနောက်, မြောက်, တောင်ဘက်အကြားစံချိန်စံညွှန်းအတွက်အကြီးအကျယ်ကွဲပြားခြားနားမှုကိုကျော်လွှားရန်စတင်။
Valerie Gyurov အကြောင်းပိုမို:
LinkedIn မှာ Valery Gyurov
ဗိသုကာအတတ်ပညာ, အတတ်ပညာ, ပုံစံ, startup | | rating:5/ 30